တရုတ် PEEK လှံတံထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Hengbo
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > PEEK Semi- ချောထုတ်ကုန်များ > Peek လှံတံ
Peek လှံတံ လူသိများကြသည်အားလုံးသော thermoplastic များကြားတွင်ဓာတုဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ wear ခံနိုင်မှုနှင့်အပူခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းတို့မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
Peek လှံတံs ဖြစ်ကြသည်အမျိုးမျိုးသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပုံစံမျိုးစုံ၏ပြား / စာရွက်များ, အရက်ဆိုင်/ ချောင်းတွေ, ပိုက်, ရုပ်ရှင်, monofilaments, etc
ဓာတုဒဏ်ခံနိုင်မှုPeek လှံတံအမျိုးမျိုးသောအက်ဆစ်နှင့်အယ်လ်ကာလီဖြေရှင်းမှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောပြင်းအားမြင့်အောက်ဆိုဒ်အက်ဆစ်မှ လွဲ၍ ကျယ်ပြန့်သောအပူချိန်သေတ္တာထဲတွင်အာရုံစူးစိုက်သည်။ PEEK သည်အပူချိန်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအမျိုးမျိုးရှိအရည်ပျော်ပစ္စည်းအားလုံးနီးပါးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဝတ်ဆင်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်:Peek လှံတံ ဟုတ်တယ်very suitable for use in high temperature/high pressure/high speed/corrosive transmission environment; it ဟုတ်တယ်suitable for oil-free lubrication and use in the environment with strict purity requirements.
မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်: ၏ရေရှည်ဝန်ဆောင်မှုအပူချိန်Peek လှံတံs ဟုတ်တယ်260℃, and the thermal deformation temperature of PEEK reinforcement grade ဟုတ်တယ်as high as 315℃.
အလွန်မြင့်မားသောစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများ:Peek လှံတံ ဟုတ်တယ်eမြင့်မားသောအပူချိန်တွင်အသုံးပြုသောအခါအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားလိမ့်မည်သည့် xtremely မြင့်မားဆန့, compression နှင့်သက်ရောက်မှုအစွမ်းသတ္တိ။
Anti-hydrolysဟုတ်တယ်and radiation:Peek လှံတံမြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်မြင့်မားသောဖိအားရှိသည့်ရေငွေ့ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ X နှင့် Y ray ဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုခုခံနိုင်စွမ်းရှိပြီးမီးတောက်နှင့်လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သည်။ UL94V-0 တန်းကိုမီးလျှံနောက်ဆုတ်စရာမလိုဘဲရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်ပင်လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပါသည်။
မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်:Peek လှံတံ has extremely low metal ion content, and emits very few ions and gases when the vacuum ဟုတ်တယ်high. It ဟုတ်တယ်very suitable for applications in semiconductor, ultra-pure water and other industries with strict requirements for purity.
Peek လှံတံsပုံမှန် application များ:Aospရာဝတီ/ Aမော်တော်ကား /Medical /Sလျှပ်ကူးပစ္စည်း /Electronics /Pဓာတုဗေဒ /Analytical တူရိယာ /Gစွမ်းအင်စက်ယန္တရားများ
JIANGSU HENGBO COMPOSITE MATERIALS CO LTD ဟုတ်တယ်a China-based company withastrong focus in the area of high performance innovation materials which including novel environmental benign antimicrobial products,Peek လှံတံ and high-end thermoplastic composite materials.
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုအနေဖြင့် GFR-PEEK လှံတံကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပေးလိုပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအကောင်းဆုံးပြီးနောက်ရောင်းချမှုဝန်ဆောင်မှုနှင့်အချိန်မီပေးပို့လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှ CFR-PEEK လှံတံကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအကောင်းဆုံးရောင်းချပြီးသောအချိန်နှင့်အချိန်မီဖြန့်ဝေပေးမည်။
ESD PEEK လှံတံ
ESD PEEK လှံတံကိုထုတ်လုပ်သည့်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှ ESD PEEK လှံတံကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အချိန်မီဖြန့်ဝေပေးမည်။
ကြွေ PEEK လှံတံ
အောက်ဖော်ပြပါသည် Ceramic PEEK Rod နှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Ceramic PEEK Rod ကိုပိုမိုနားလည်ရန်ကူညီရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ အတူတူပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်လက်ပူးပေါင်းရန်အသစ်သောဟောင်းနွမ်းသောဖောက်သည်များကိုကြိုဆိုပါသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုအနေဖြင့်သင့်အား PEEK Rod Nature ကိုသင်ပေးလိုပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအကောင်းဆုံးပြီးနောက်ရောင်းချမှုဝန်ဆောင်မှုနှင့်အချိန်မီပေးပို့လိမ့်မည်။
Peek လှံတံ ကိုတရုတ်ပြည်၏ထိပ်တန်း Peek လှံတံ ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူတစ် ဦး ဖြစ်သည့် Hengbo ထံမှဝယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် ၀ န်ဆောင်မှုကောင်းပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှုကောင်းများလည်းပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတွင် CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်စျေးနှုန်းချိုသာ။ ကြာရှည်ခံသည့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရချင်လျှင်သင်လက်ကားရောင်းနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ဖောက်သည်များအတွက်ဈေးနှုန်းများကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ငါလက်ကားရောင်းချင်ရင်မင်းငါ့ကိုဘယ်စျေးနှုန်းပေးမှာလဲ? သင်၏လက်ကားအရေအတွက်များလွန်းပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားစျေးပေါသောစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်စိတ်ကြိုက်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်သောကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည်။ ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပမှမိတ်ဆွေများနှင့်ဖောက်သည်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့ လာရောက်၍ ငါတို့နှင့်အတူပူးပေါင်းရန်ကြိုဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ကြိမ်အနိုင်ရနိုင်သည်။